Warshadda labbiska Kubadda Koleyga ee Shiinaha iyo soosaarayaasha | Neeming
Labiska kubbadda koleyga
Suut Tababar Kubbadda cagta
Kooxda Kubadda Cagta
Labiska kubbadda cagta
Soccer Jersey iyo Gaaban
Shaati Ragga Orodka
Sare Socodka Gacmo La'aan
Dharka kubbadda koleyga, lebiska kubbadda koleyga, funaanadda kubbadda koleyga iyo gaagaaban.
Waxaa laga sameeyay 100% polyester, oo leh qoyaan qoyan, qalalan oo dhaqso leh, oo neefsan kara
waxqabadka. Lambarro gaar ah, magac iyo astaan ​​kooxeed
Soo ururinta dharka kubbadda koleyga waxaa ka muuqda naqshad jilicsan iyo qaababka waxqabadka, sida qoyaanka qoyaanka, qalaylka degdegga ah, neefsashada, bakteeriyada ka hortagga UV. Astaanta naadiga iyo lambarka ciyaaryahanka waa lagu dari karaa.
Waxaan haynaa in ka badan 50 midab oo aad ku xulatay. Daabacaadda 'Silk', daabacaadda silikoonka ama daabacaadda waxaa loo samayn karaa sidii naqshadeyntaada. Waxaan sidoo kale kuu haynaa MOQ dabacsan
Waxaan sidoo kale leenahay dhar cad oo lagu sameeyo daabacaadda sublimation, khad tayo sare leh ayaa hubin doona dhalaalka midab kasta. Sublimation ka dib, loo diyaariyey goynta laser ka dibna wada tolaa. Shaxan kasta iyo qaabab la doonayo ayaa lagu daabici doonaa iyada oo aan la xadayn MOQ.
Macno malahan inaad tahay taageere kubbadda koleyga, koox, naadi ama iskuul, waxaad ka heli kartaa waxaad uga baahan tahay ururintayada ballaaran.
Sharaxaad Dharka Kubbadda Koleyga
Qaabka No. BJ-003
Faahfaahin 1, 100% caag, 140gsm
3, Wareeg - qoorta
4, Gacmo la'aan
5, Laba-tolmo & tollayn tolmo leh.
Dabeecad 1, Jilicsan & neefsasho
2, Farsamo fidsan
3, qoyaanka qoyaanka & qalalan deg deg ah
Astaanta & Sawirada Daabacaadda Custom, daabacaadda
Codsiga Kubbadda koleyga oo xiran, tababar, orod, waxqabadyo firaaqo ah
Xirxirida Mid walba polybag-ga lagu rido kartoon
Hubinta Tayada 100% kormeer kahor dhalmada; Aqbal 3rd kormeerka
Da 'kooxeed Dadka waaweyn / Mudanayaal / Dhallinyaro
Waqti Sample ah 5-7 Maalmood
Waqti badan 45-60 Maalmo
Shuruudaha Ganacsiga FOB / CFR / CIF / DDP
Shuruudaha Bixinta T / T, 40% dhigaalka, dheelitirka kahor dhalmada
Habka Maraakiibta Badda / Hawada / Tooska - FedEx, UPS, DHL
Dekedda / Madaarka Tianjin / Beijing
Rarista rarka Waxaa lagu heli karaa codsi
Maxaad u dooratay US
1) MOQ debecsan
2) Bixi adeegga ku-meel-gaadhka ah
3) shaqaale xirfad leh, iibin xirfadeed & koox adeeg
4) Gadiid wax ku ool ah iyo kharashka shaqaalaha oo hooseeya
Hore: Suudka Basketball
Xiga: Jaakada Baaskiilka
Gaabyo Kubadda Koleyga
Maaliyadaha Kubbadda Koleyga ee Ugu Fiican
Kubbadda Koleyga iyo Gaaban
Waxaan u adeegnaa naadiyada isboortiga, ururada, kulliyadaha, dukaamada, xarumaha dukaamaysiga, urur dawladeed, shirkad iyo shaqsiyaad iwm.
Fulinta amarrada OEM & ODM dhammaan noocyada kala duwan. Kaliya ma bixinayno adeegga nashqadeynta & wax soo saarka laakiin sidoo kale adeegga la-talinta ganacsiga.